Dal Carbeed oo oggolaaday "kaniinka kordhiya dareenka haweenka" - Aayaha
Home ARIMAHA BULSHADA Dal Carbeed oo oggolaaday “kaniinka kordhiya dareenka haweenka”
Dal Carbeed oo oggolaaday “kaniinka kordhiya dareenka haweenka”
Iyadoo dalka Masar uu noqonayo dalkii ugu horreyay ee Carab ah ee meelmariya soo saaridda iyo ka ganacsiga daawada kordhisa dareenka haweenka, ayaa weriyaha BBC-da Sally Nabil waxay u kuur gashay in dawadaasi ay suuq ka leedahay dalkaasi shacabkiisu dhaqanka ku dhagan yahay.
“Waxaan dareemay dawaqsanaan, wadnahayguna aad buu u garaacmayay”
Waa sida ay Leyla dareentay kaddib markii ay qaadatay kaniinkii ugu horreeyay, oo loo yaqaanno flibanserin.
Isticmaalka daawada ayaa markii ugu horreysay laga oggolaaday Mareykanka saddex sano kahor, haatanna shirkad farmashi ayaa ku sameysa gudaha Masar.
Leyla – ma aha magaceeda saxda ah – waa haweeney gurijoog ah oo ku jirta da`da soddomeeyada. Waxay doorbideysaa inay is qariso sida haween badan oo Masar ku nool oo kale, ka hadalka dhibaatooyinka galmada iyo baahida la xiriirtaba weli wax aad looga xishoodo ayay ka tahay dalkaasi.
Kaddib ku dhowaad muddo toban sano ah oo la qabay, waxay go`aansatay inay daawadaasi tijaabiso.
Leyla, oo aan qabin wax dhibaato caafimaad ah, ayaa soo iibsatay daawada iyadoo uusan dhakhtar u qorin – tan oo dhaqan caadi ah ka ah Masar, halkaas oo ay dadku iska soo iibsadaan daawada.
“Qofka farmashiyaha iibinayay wuxuu ii sheegay inaan kaniinka qaato habeen walba muddo dhowr toddobaad ah. Wuxuu ii sheegay inuusan wax dhibaato ah lahayn,” ayay tiri Leyla. “Seygeyga iyo aniguba waxaan dooneynay inaan aragno waxa dhici doona. Hal mar baan isku dayay, dib dambana uma qaadan doono.”
Furriinka ayaa aad ugu badan Masar, warbaahinta gudaha qaarkood ayaana arrintan ku sababeeyay inay tahay dhibaatooyin dhanka galmada ah ee lammaanayaasha u dhaxeeya.
Shirkadda soo saarta daawada flibanserin ayaa sheegtay tobankii haween ee Masar ku noolba uu saddex ka mid ah dareenkoodu hooseeyo. Balse tiradaasi waa uun qiyaas – in tiro sax ah laga helo dalkaasi aad bay u adag tahay.
“Daawadan aad baa halkan looga baahnaa – waa horumar,” ayuu yiri Ashraf Al Maraghy oo wakiil ka ah shirkadda.
Maraghy ayaa sheegay in daawadu aysan wax dhib ah lahayn isla markaana ay waxtar leedahay, wuxuu xusay in dawaqsanaantu ay suuli doonto muddo kaddib – balse farmashiistayaal iyo dhakhaatiir kale kuma raacsana arrintaasi.
Farmashiiste aan la hadalnay ayaa ka digaya in kaniinka uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga, wuxuuna qabaa inuu u daran yahay dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha iyo beerka la xiriira.
Murad Sadiq, oo farmashi ku leh waqooyiga Qaahira, ayaa sheegay inuu mar walba macaamiishiisa u sharxo dhibaatooyinka uu leeyahay kaniinka, balse ay ku adkeystaan inay iibsadaan.
“Qiyaastii 10 qof ayaa maalintii ibsada kaniinka. Badankoodna waa rag. Haweenku aad bey uga xishoonayaan inay ku weydiiyaan.”
‘Wax walba waa maskaxda’
Gudaha farmashiga Sadiq, waxaan ku xardhan xayeysiis loo sameeyay kaniinka flibanserin oo loogu magac daray “kaniinka basaliga ah”. Waa nooca haweenka loogu talo galay oo la mid ah “kaniinka buluugga ah” – waa magaca kaniinka kordhiya dareenka ragga looga yaqaanno Masar .
Balse shirkadda ayaa sheegtay inay qalad tahay in la adeegsado erayga “female Viagra” oo loola jeedo kaniinka kordhiya dareenka haweenka. “Warbaahinta ayaa magacaas la timid, annaga maaha,” ayuu yiri Maraghy.
Halka kaniinka Viagra ee ragga loogu talogalay kordhinta dareenkooda, flibanserin wuxuu ka hortagaa walbahaarka wuxuuna xoojiyaa dareenka haweenka isagoo isku dheellitiraya kiimikada maskaxda ku jirta.
“Female Viagra’ waa eray marin-habaabin ah,” ayay tiri Heba Qotb, oo ah dhakhtarad arrimahaasi ku takhasustay, waxayna diidday inay isticmaalka kaniinkaasi kula taliso bukaannadeeda.
“Waxba kama tarayo haweeney ay haysato dhibaato maskaxeed iyo mid jireedba,” ayay tiri.
“Haweenku, wax walba maskaxdooda ayay la xiriiraan. Haweeneydu xiriir galmo oo caafimaad qaba lama wadaagi karto seygeeda haddii uu si xun ula dhaqmo. Wax daawo ah oo arrintaasi wax ka taraya ma jirto.”
Heba Qotb ayaa sheegtay in waxtarka flibanserin uu aad u yar yahay, isla markaana aysan mudneyn in halis la isku geliyo. “Inuu hoos u dhigayo cadaadiska dhiigga waa dhibaato weyn oo khatar ah,” ayay ka digtay.
Haweenka Masar weli uma dhowa inay si saraaxad leh uga hadlaan arrimaha la xiriira galmada.
Leyla waxay sheegtay inay garaneyso haween badan “oo furriin dalbaday kaddib markii xiriirkooda galmo uu xumaaday sababo la xiriira dhibaatooyin ku gedaaman guurkooda”.
“Haddii uu seygaaga daciif yahay, waad caawineysaa daaweyn caafimaad ayaadna la raadineysaa, haddiiba uu yahay sey wanaagsan. Balse haddii uu yahay qof xun, waad ka xiiso dhaceysaa, xitaa haddii uu sariirta ku wanaagsan yahay. Raggu uma muuqdaan kuwo arrintan fahmaya.”
Inkastoo weli lagu jiro maalmihii ugu horreeyay, Sadiq ayaa sheegaya in iibka kaniinka uu wanaagsan yahay wuxuuna aaminsan yahay inuu sare u sii kici doono.
Balse Heba Qotb, oo ah dhakhtarad arrimaha galmada ah, ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka ka dhex jira lammaanaha is qaba.
“Markii uu nin dareemo inaysan waxba ka soo naaso caddeyn xaaskiisa, iyadoo xitaa qaadaneysa kaniinka, iyada ayuu eedeynayaa, ee ma eedeynayo waxtar la`aanta kaniinka amaba xiriirkooda xun. Wuxuuba xitaa tan u arkaa fursad uu ku xumeyn karo.”
Previous article3 Sabab oo kugu qasbaya inaad iska iloowdo nin ama naag aanan fariimaha kaaga soo jawaabin
Next articleMaalqabeen sanado ka dib ogaaday inaanu dhalin carruurtii loo hayay
Waxyaabaha Sababa in Naasaha Ay Dhacaan & Sida Looga Hortago
Gabar Isbitaal Ku Dhex Guursatay Ninkii Ay Jecleyd Oo Dhaawac Ah
Ben Kitili Iyo Aamina Oo Kala Tagay Laba Sano Kadib
Ha Sii Deyn Gabadha Leh 14-kaan Tilmaan
Aayaha editor - December 16, 2018 0
Dadka ku jira xiriirrada waqtiga dheer qaata waxa ay ku tagi doonaan maalin ay is weyddiiyaan: tolow tani ma tahay qoftii aan rabay nolosheyda...
5 Sababood Oo Kugu Qasbaya Inaadan Marnaba Baarin Taleefanka Xaaskaaga (Ka...
Signs you are doing the job you were born to do
3 Waxyaabood Oo Muhiim Ay Tahay Inaad Iska Hubiso Kahor Intaadan...
Tilmaamaha Jacaylka Dhabta Ee Xiriirka Lamaanayaasha Kala Fog
3 signs you’re dating a guy who had a toxic ex
8 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Leedahay Lamaane Xun
3 Talo Oo Ay Tahay Inaad Qaadato Marka Gabar Ay Ku...
3 Sabab Oo Gabadha Aysan Uga Soo Jawaabin Farriimahaaga
RAGGA: Sideedaan Calaamadood Gabadha Hadaad Ku Aragto Si Daran Ayay Kuu...
Daawo: Fanaanadda Deeqa Afro oo si lama filaan ah uga hadashay...
Maxaad ka taqaan gabadha ah bilyaneerka ugu da’da yar adduunka?
7 ficil oo lamaanahaaga tusaya inaad si dhab ah u jeceshahay
Noocyada Ragga Dumarku Ay Si Fudud Ku Jeclaadaan
3 Waxyaabood Waligaa Haku Odhan Qof Lamaanihiisa Ay Kala Tagayaan (Furriin)
Haddii Aad Heshid Haweeney Leh Lixdaan Calaamadood Ha Iska Deynin (Waa...
Sidee loogu sheegaa Seygaaga inaad u baahantahay Ciyaarta Sariirta ?’
XIRIIRKA IYO GUURKA786